ဆရာတော်အရှင်ဇဝန မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)၏ ထေရုပတ္တိအကျဉ်း | The Noble Eightfold Path
ဆရာတော်အရှင်ဇဝန မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)၏ ထေရုပတ္တိအကျဉ်း	မန္တလေးတိုင်း၊ အမရပူရမြို့၊ နန်းတော်ရာ စံပြကွက်သစ် ရပ်ကွက်၌ အဖဦးထီ၊ မိခင်ဒေါ်သိန်းရင်တို့မှ ၁၃၂၆ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း(၁၅)ရက်၊ အင်္ဂါနေ့(၁၆-၂-၆၅) တွင်ဖွားမြင်သည်။ မွေးချင်းလေးယောက် အနက် ဒုတိယမြောက် သားရတနာဖြစ်သည်။
၁၃၃၈ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့၊ မူလဆီးဘန်နီကျောင်းတိုက် ပညာ့ဗိမာန် သာသနာပြုကျောင်း၌ ဆရာတော် ဦးပညာသာမိကို ဥပဇ္ဈယ်ပြု၍ မယ်တော်၊ ခမည်းတော်တို့၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟုဖြင့် ရှင်သာမဏေ ဘ၀သို့ရောက်ရှိ သည်။
၁၃၄၆ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၅)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ တောင်ပြင် မိုးတားကျောင်းတိုက် ခဏ္ဍသိမ်၌ မိုးတား တိုက်အုပ်ဆရာတော် ဦးမေလိယကို ဥပဇ္ဈယ်ပြု၍ မြင့်မြတ်သောရဟန်းဘ၀သို့ ရောက်ရှိသည်။ ရဟန်းဒကာ၊ ရဟန်းအမများမှာ မန္တလေးတိုင်း၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ သီတာအေး(၉၂၀)ရပ်ကွက်မှ ဦးဝင်းမြင့်+ဒေါ်ထွေး၊ ဦးဝင်းမြ+ဒေါ်ခင်မူ တို့ဖြစ်သည်။
မန္တလေးမြိူ့၊ မူလဆီးဘန်နီကျောင်းတိုက် ပညာ့ဗိမာန် သာသနာပြုကျောင်း၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ တောင်သာ မြို့နယ်၊ သာသနာ့ မူလိကာရာမကျောင်းသစ်ကျောင်းစာသင်တိုက်၊ မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက် သစ်တို့၌ ပထမကြီးတန်း အောင်မြင်၍ ဓမ္မစရိယတန်းရောက်သည်အထိ ပရိယတ္တိစာပေများကို သင်ယူ ခဲ့သည်။
ဆရာနည်းရအောင် အချိန်ယူ၍ အားထုတ်ခဲ့သော ၀ိပဿနာနည်းများမှာ
လယ်တီ ၀ိပဿနာ တို့ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ပခုက္ကူဝိပဿနာသင်တန်းတရားကို အမာခံ၍ ဟောကြားပြသလျှက်ရှိသည်။ ဆရာတော် ရေးသားသော ကျမ်းစာအုပ်များကို ဖတ်ရှုမိရာမှတစ်ဆင့် ပင့်ဖိတ်မှုများကြောင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်သို့ ကြွရောက်ကာ တရားဒေသနာများကို ဟောကြားပြသလျှက်ရှိသည်။ စေတနာ သဒ္ဓါတရား အလျှောက် လှူဒါန်းလာသော ကျောင်းမြေများကို အလှူခံ၍ ရိပ်သာများဖွင့်လှစ်ကာ တရားပြသလျှက် ရှိသည်။
ကော့သောင်းမြို့(၇)မိုင်တောရ ဝေနေယျသုခဓမ္မရိပ်သာတွင် တပေါင်းလမှ နယုန်လအထိ၊ မြိတ်မြို့နယ် ကျောက်ဖြူတောင်ရွာသစ်ညီနောင် ရွှေပြည်သာဓမ္မရိပ်သာတွင် ၀ါဆိုမှ သီတင်းကျွတ်လထိ၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးကျောင်းတွင် တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပို့တွဲလထိ အလုပ်ပေး ၀ိပဿနာတရားများကို ဟောကြားပြသလျှက်ရှိသည်။
ရဟန်းနှစ်ဝါ(၂၂) နှစ်သားမှ ယခုချိန်တိုင်အောင် ဗုဒ္ဓဓမ္မလောက၊ ဓမ္မရံသီ၊ ဓမ္မရတနာ၊ မြတ်ဆုမွန်၊ မြတ်မွန်ရတနာ၊ သာသနာ့ရောင်ခြည်၊ ဇမ္ဗူ့ရတနာ၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်၊ နိုင်ငံဂုဏ်ရည်၊ ဘာသာသွေး၊ မြစ်မခစာသ၀ဏ်၊ သူရဇ္ဇ၊ ရောင်ပြန် စသော မဂ္ဂဇင်းများတွင် ဆောင်းပါးအပုဒ်နှစ်ရာကျော်နှင့် ၀တ္ထုတို၊ ရှည် အပုဒ်(၁၀၀)ကျော်တို့ကို ရေးသားခဲ့သည်။ ကလောင်အမည်များမှာ-
မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) ဟူသော ကလောင်အမည်ဖြင့်
၁၉၉၂ခုနှစ်တွင် မြတ်ဆုမွန် မဂ္ဂဇင်းမှ ဦးစီး၍ ကျင်းပသော ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ထွက်ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ် ဟူ သော ခေါင်းစီးဖြင့် ဆောင်းပါးပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆု ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသော မြတ်မိခင်စာပေဆုဝတ္ထုတိုပြိုင်ပွဲတွင် နံ့သာပမာ မိဘမေတ္တာ ၀တ္ထုဖြင့် တတိယဆုကို ရရှိသည်။
ယခုအခါ ရွှေပြည်သာမြို့-မန္တလေးကျောင်းတိုက်၊ မှော်ဘီမြို့-သုဒ္ဓ၀ိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာကျောင်းတိုက်၊ မြိတ်မြို့-သစ်ညီနောင် ဓမ္မရိပ်သာကျောင်းတိုက်၊ ကော့သောင်းမြို့-ဝေနေယျသုခဓမ္မရိပ်သာကျောင်း တိုက် တို့တွင် လှည့်လည်၍ ၀ိပဿနာတရားများကို ဟောကြားပြသလျက်ရှိသည်။
This entry was posted on August 31, 2012 by Noble Kyaw. It was filed under ဆရာတော်ကြီးများ၏ထေရုပတ္တိ .	→